DF Soomaaliya oo maanta si kumeel gaar ah u fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa +(SABAB) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo maanta si kumeel gaar ah u fasaxday duulimaadyadii caalamiga...
Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar) /Sawir hore/Keydka HQ
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa Sabtidii maanta waxa ay soo saartay go‘aan cusub oo la xiriira duulimaadyada caalamiga ah ee soo gaara dalka, kadib markii dowladda muddo 15 cisho ay joojisay duulimaadka cabsi laga qabo faafidda cudurka Coronavirus.
Warqad ka soo baxday Xafiiska Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawada Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa lagu sheegay cabasho kala duwan oo ka timid muwaadiniin Soomaaliyeed, dowladda inay garowsatay laba cisho in la fasaxo duulimaadyada.
Wasiirka ayaa sheegay mudada labada cisho inay dalka soo gali karaan duulimaadyada caalamiga, maadaama muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku xaniban yihiin dalka dibadiisa.
Si kastaba, labadaasi cisho kadib waxaa si toos ah u dhaqan geli doono go‘aankii dowladda ay ku mamnuucday duulimaadyada, sida Wasiirka uu xaqiijiyay.
DF Soomaaliya oo maanta si kumeel gaar ah u fasaxday duulimaadyadii caalamiga
Maxamed Cabdullaahi Salaad